ICOMIKET Bloodrive Donation ABAHLULEKILE Sibonga Kwabesifazane - Okunye
ICOMIKET Bloodrive Donation ABAHLULEKILE Ngemuva Kokucoboshisa Kwabesifazana Abasentshonalanga
IComiket nered cross ziyaziwa ngemikhankaso yazo yokuqhuba igazi eJapan, ukuthola abantu ukuthi banikele ngegazi.
Lokhu akuyona imfihlo.
Kepha ngemuva kwempikiswano eshukunyiswe ngabesifazane besifazane basentshonalanga ku-Twitter mayelana Uzaki Chan’s Blood Drive ngo-2019, uComiket wanquma ukuthatha indlela 'ecabangelayo'.
comiket red cross ibhasi
comiket igazi drive ibhasi
Ukukhangisa emabhasini abo ngokwesibonelo - banezithombe “ezidlulele” zamantombazane e-anime.
Kungenzeka futhi BANGABE bhasi bonke ndawonye ngoba abafihlekile kakhulu kude.
Futhi - amantombazane e-anime okukhulunywa ngawo athelwe ngamanzi ngamasayizi amancane esifubeni ukujabulisa abesifazane abangazethembi ku-Twitter.
Phezu kwakho konke lokhu okungenangqondo okwenziwe isiphambano esibomvu noComiket abakwenzile, kusenamalungelo abesifazane besentshonalanga (e-USA) abakhala ngabalingiswa “abahle” kunokuba banukubezwe ngokocansi.
Noma ngamanye amagama: lokhu konke kuyinkohliso futhi bafuna kuphela okuthile abangakhala ngakho.
Ngemuva kwakho konke - lokhu kumayelana nokulawulwa nokufuna ukunakwa.
'Kenketsu no Susume' leyo abanye abantu sebeyithathile. Ngicabanga ukuthi le yindawo yokulahla izingqwembe zokunikela ngegazi, kepha kubukeka sengathi abanye abantu basese NG. Kuyinto engithatha izinqumo ngedwa, ngakho-ke ngithanda ukubuza okuncane ngokuhlolwa kwabesifazane. pic.twitter.com/RnuwJyIja3
- Tetsuo Kashiwagi ∃xist (@ tkore61) Novemba 2, 2019
“Ngingancamela ukube abasebenzi besilisa bebekhona ngakho bekungu-50/50.
“Kungani kunabesifazane abasebasha nabathandekayo kuphela? Yini inhloso yayo lapha? Yilokho engikushoyo. Uhlobo lwabesifazane abasebenza emkhankasweni wokunikela ngegazi bavezwa ngendlela ekhohlisayo. Kukhona umuzwa ovukelayo wokungajabuli ngokubabona ngale ndlela, yebo? Umkhankaso wokunikela ngegazi awuyona leyo nkonzo. ”
Okuxakayo lapha ukuthi AKUKHO lutho oluphathelene nokunikela ngegazi kubantu bangempela eJapan.
Yilona lonke iphuzu lomkhankaso.
Abalingiswa be-Anime akuzona ezangempela futhi akufanele babe ngokoqobo, yingakho eqanjiwe.
> Imifanekiso ejwayelekile yezinhlamvu ezinhle (ngaphandle kokuvezwa ngokweqile noma amagama ocansi) izimpawu nezikhangiso.
Noma kunganjani #Gaze Village NoFemi abathenjwa ngoba bashayile. pic.twitter.com/iNfBczkRRy
- Zen (@dainodoragon) Novemba 24, 2019
Ngokuhlukile Tweet umuntu onengqondo uthi:
'Yingakho abalweli besifazane kungafanele bathembeke.'
Idlanzana elikhulu labesifazane besifazane baseMelika abahlasela noma yini eyenza BABE nomuzwa wokuthi abavikelekile abanakwethenjwa.
Ayikho into abayikhankasayo, abakhalaza ngayo, noma abamemeza ngayo ku-Twitter ephethe noma yikuphi ukubaluleka kwayo futhi ayisoze yaba inkinga yangempela ethinta kwangempela abantu.
Bangabantu abambalwa kakhulu abalinyazwe Amadoda futhi manje bafuna noma iyiphi iNdoda (noma amantombazane e-anime kuleli cala) ethulwa ngendlela ethile ukungacabangi kahle futhi unobuthi obusobala.
Kuyadabukisa ukuthi kunezinhlamvu kuphela ezingenasampula. Ingabe lokhu futhi kungenxa yomphumela obandayo? https://t.co/9RQymXMoCM
- UTakeyoshi Takamura #WalkAway (@tk_takamura) Januwari 1, 2020
Into ye-SAD ngeRed Cross neComiket ibuyisela emuva kumiklamo yabo ye-anime. Futhi ukunakekela kubantu besifazane abangenalutho abakhalaze NGISHO lapho sebethole abakufunayo, kuyinto umuntu uzofa ngenxa yalesi sinqumo.
Umkhankaso wawungu Ngaphansi iphumelele kune-Uzaki Blood Drive ngegebe elibanzi. Iphuzu eliphelele lomkhankaso wokuqhutshwa kwegazi ukunikeza igazi kubantu abaswele.
Ngakho-ke ngenxa yalokhu - noma ngubani ohlupheka ngenxa yalezi zenzo ezilungile nezepolitiki angafa.
Uma lokho kwenzeka - abesifazane abazinikele abanganiki i-sh * t nganoma iyiphi indlela, kanti iRed Cross izoba nephutha.
Kukhona indlela yokukwenza.
Imifanekiso ejwayelekile yezinhlamvu ezinhle (ngaphandle kokuvezwa ngokweqile noma amagama ocansi) izimpawu nezikhangiso.
Inkululeko yokukhuluma amaqhawe ayikuthandi lokho futhi, akunjalo?
Akuyona into engenakuphikiswa ukufuna ukuvula zombili izithombe ezivusa inkanuko kanye namagama avusa inkanuko?
- Master & # x1f48b; & # x1f496; (@kyunoyakatachan) Novemba 24, 2019
Abantu abanjena banephutha.
Yikho impela lokhu ukuvimbela, ukukhwabanisa, nokunemba kwezepolitiki kuyinto embi.
Akukho okuhle okuvela kukho, ngaphandle kokwenza idlanzana labantu “lizizwe” kangcono ngezinkinga zalo ezingahlobene, kulimale ukulimaza iningi elihluphekayo.
Umthombo wezindaba: UNoriyuki Uyasebenza.
Kungani I-United Nations Ilwela Ukuvimbela Ama-Anime Ayenzi Ingqondo
Inkinga Ngabesifazane Bama-Anime ENtshonalanga (Ne-Ajenda Efihliwe)
iyini i-anime enhle kunazo zonke
uhlu lwezinhlu ezinhle kakhulu ze-anime ongazibuka